Hitety Faritra haneho ny talentany Rabenjamalala Ny Aina Michou, fantatry ny maro amin’ny hoe i Koukoumi. Misehatra eo amin’ny tontolon’ny mazia na hakingan-tanana sy hakingan-tsaina izy. 2 septembre 2020
Matetika amin’ny mariazy, tsingerin-taona nahaterahana, fetim-pianakaviana, lanonana samihafa no anehoany ny talentany, indraindray mampilalao ankizy eny an-dalana na any am-pianarana ihany koa. Ny hampandroso ny mazia no tanjony ary hanana ny maha izy azy ny mpanao hakingan-tanana sy hakingan-tsaina eto Madagasikara, ka hisian’ny mpanao mazia malagasy ahenoana laza any ivelany.
Maro karazana ny mazia na hakingan-tanana, « mentalisme » na hakingan-tsaina : ireo raha lazaina amin’ny ankapobeny fa afaka mizarazara toy ny « illusion », « hypnose », « mémorisation » sns.